चिकित्सक संघको चुनावलाई फर्केर हेर्दा | Nepali Health
२०७३ असोज ७ गते १०:३९ मा प्रकाशित
डा. पुष्पमणी खराल
राजनीतिमा आस्था र विश्वास राख्नु स्वभाविक हो । त्यहि आस्थाको आधारमा विपक्षसंग मत मतान्तर हुनुपनि स्वभाविक हो । तर के यो मतान्तर सबै ठाँउमा जायज छ ? म भन्छु पक्कै छैन । किनभने व्यावसायिक हक हित र अधिकारको रक्षा गर्ने हेतुले खोलिएका संगठनहरुमा पार्टीगत मत विभाजन हावी भएमा संगठन कमजोर बन्छ ।
राजनीतिक पार्टीको नाम बिशेषमा फरक फरक प्यानल बनाउदा संगठन कमजोर मात्र होइन कसैको प्राइभेट कम्पनी जस्तो समेत हुन सक्छ । किनकी त्यहाँ संस्थाका एजेण्डाहरू गौण र पार्टीका एजेण्डाहरु हावी बनेर निस्किदिन्छन् । यसले अनि देखिन्छन् यस्ता क्रियाकलाप संस्थाका नाम, पार्टीका काम ।
यस्ता गतिविधिहरु नेपालमा प्राय सबै संगठनमा लागू भएको पाइन्छ । तर मैले यहाँ जोडन खोजेको प्रशंग भने नेपाल मेडिकल एशोसियसनको चुनावसंग सम्वन्धित छ ।
भर्खरैमात्र सम्पन्न नेपाल मेडिकल एशोसिएसनको चुनावमा घोषित रुपमा दुई प्यानल थिए । स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा म मात्रै थिएँ ।
एउटा प्यानलले शुरूमा प्रजातान्त्रिक भनेर नाम दियो र पछि त्यसको नाम परिवर्तन गरेर फलानो अध्यक्षको समूह भनेर सच्याइयो । अर्को प्यानल थियो पेशागत समावेशी समूह( पीआईपी) । पीआइपी झट्ट हेर्दा एमाले पार्टी निकटको प्यानल जस्तो देखिए पनि त्यसले अरु पक्षलाई समेट्न खोजेको देखिन्थ्यो । तर सारतः त्यो पनि राजनीतिक प्यानल नै थियो ।
एनएमएमा सधैजसो एकक्षत्र राज गर्दै आएको कांग्रेस निकट मानिने प्रजातान्त्रिक प्यानल अघिल्ला पटकमा जस्तै यसपटक पनि दुई तिहाई मतले प्यानल नै जित्छौ भन्दै दम्भका साथ हिडेको थियो ।
अर्को प्यानलले चाहि प्रजातान्त्रिक प्यानलको घमण्ड यसपाटी तोडेरै छाड्ने भन्दै प्रचार गरेका थिए । र दुबै प्यानलको प्रचार हेर्दा जो कोहीले पनि चाल पाउथ्यो कि त्यहाँ एजेण्डा भन्दा पार्टीको इगो हाबी छ ।
चुनावमा प्यानल वा समुह बनाउनु आफैमा नराम्रो भने पक्कै होइन । यसो गर्दा ठूलो धन राशी र समय को बचत हुन्छ । प्रचार प्रसार गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ । प्यानलको एउटा ब्यक्तिले अरुलाई प्रचार गर्दा प्यानलका सबै सदस्यहरु सबै ठाँउमा जान नपर्ने हुन्छ । सबै जनाको सामुहिक प्रयास हुँदा उम्मेदवार को जित हुने सम्भाबना पनि बढ्छ ।
तर राजनीतिक पार्टीको नामलाई आधा मानेर, पार्टीको निर्णय अनुसार उम्मेदवारको नाम चयन गरेर बनाइने प्यानलले हाम्रो समुदायमा बिभाजन, कटुता र बैमनस्यता ल्याउछ । पार्टीपार्टीबीचको ईगो हाबी भइदिदाँ चुनाबी एजेण्डा सतहमा आउन सक्दैन । पार्टीको साख जोगाउन पर्छ भनेर मान्छेहरु मरिमेटछन । जसबाट जात भात दण्ड भेत प्रयोग गरेर भएपनि चुनाव जित्नै पर्छ भन्ने मनशाय उत्पन्न हुन्छ । तर यो अपवित्र शैलि हो ।
एनएमए डाक्टरहरुको साझा चौतारी
नेपाल मेडिकल एशोसिएसन (एनएमए) नेपाली डाक्टरहरुको साझा चौतारी हो । यस भित्र र बाहिर गरिने वा हुने सबै गतिबिधीहरुले प्रत्येक चिकित्सकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । एनएमएलाई केबल केही राजनीतिक दलहरूको लडाईको क्रिडास्थल बनाउन खोज्नु हुदैन् ।
डाक्टरहरुको हितको पक्षमा आबाज बुलन्द गर्न हामी कुनै पार्टी विशेषको धरातलबाट माथी उठन जरुरी छ । पार्टी विशेषको प्यानल बनाउँदा काम गर्न गाह्रो पर्छ ।
कुनै एजेण्डामा अडिग रहन हम्मे पर्छ । किनकी पार्टीको नाममा चुनाव लडेपछि पार्टीको आदेश मान्नै पर्छ । मैले देखेको, चुनावमा उत्रदा पार्टीको नाम लिएर उठ्नुभन्दा समय निकाल्न सक्ने, काम गर्न आँट र अठोट भएकाहरुको समूह बनाउन उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्नु पर्दैन ।
मैले यसकारण स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएँ
समूह बनाएर चुनावमा उठ्दा बिजयी हुने सम्भाबना बढी हुन्छ भन्ने थाहा पाँउदा पाँउदै मैले किन एक्लै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए ? कसैले भन्लान कुनै प्यानलले उपयुक्त पद नदिएर, एकथरिले भन्लान कसै सँग मिल्न नसकेर, कसैले यो पनि भन्लान कि समुह बनाउने सामथ्र्य नभएर । यी सबै तर्कहरु गलत छन ।
मलाई कसैसंग बार्गेनिङ गर्नु थिएन र छैन् । सामाजिक सन्जालमा मैले चुनाव हुनु भन्दा तीन महिना अगाडि नै महासचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको थिएँ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने पहिलो दिनको एक बिहानै मैले उम्मेदवारी दर्ता गराएको थिएँ ।
आत्मबिश्वास मात्र एक कारण थियो मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुमा । मलाई लागेको थियो अब नेपाल मेडिकल एशोसिएसनलाई हेर्ने डाक्टरहरुको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । धेरै चाहन्छन्, स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि समर्थन गरिएमा एनएमएमा राम्रो समाबेशी समूह बन्छ र ठुलो बहशको थालनी हुन्छ । हो, यही बिश्वासमा मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको थिएँ ।
करीब २ हजार ९ सय मत खसेकामा झण्डै २५ प्रतिशत अर्थात ७१२ मत मैले पाएको थिएँ । यसलाई मैले ठूलो उपलव्धी मानेको छु । किनकी यसले अब उप्रान्त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहनेलाई ठूलो प्रोत्साहन जगाउन सक्छ ।
चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने क्रम मा धेरैले किन एक्लै उठेको ? एक्लै उठ्दा धेरै गाह्रो हुन्छ । भन्नु भएको थियो । मैले यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरेको थिएँ । हो, साच्चै नै गार्हो हुन्छ । एक्लै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम नेपालगन्जसम्म एक्लैले गाडी चलाउदा के हालत भएको थियो, जसले पनि अनुमान लगाउन सक्छ । समय पनि धेरै खर्चिनु पर्ने, आर्थिक भार पनि समूहमा उठेकालाई भन्दा एक्लो उम्मेदवारलाई बढी पर्ने थियो । तर यी कुराहरु मलाई पहिल्यै थाह थियो ।
मलाई प्रमाणित गर्न मन थियो । एजेण्डा राम्रो बोकेमा स्वतन्त्र उम्मेदवार लाई पनि ठुलो समर्थन मिल्छ । स्वतन्त्रले पनि चुनाव आट्न सक्छन र जीत पनि हात पार्न सक्छन् भन्ने बिश्वास जगाउनु थियो ।
हल्लाहरु पनि सुनियो, स्वतन्त्रले बढिमा सय मत ल्याउला, जमानत जफत हुन्छ आदि इत्यादि । यस्ता हल्लाले मलाई थप मजबुत बनाउँथ्यो, झन उर्जा बढ्थ्यो । यस्ता हल्लाहरुमा मैले कसैलाई दोषी देख्थिन किनकी सिङ्गो समाज नै यस्तै थियो । दुई र एक जोड्दा मात्र तीन हुन्छ भन्ने सोच हाबी थियो । मलाई एक, एक, एक पनि तीन हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुथियो । जुनकुरा चुनावको नतिजा बाट प्रमाणित नै भयो ।
गएको चुनावको अनुभबले मलाई एक्लै उठ्नु भन्दा स्वतन्त्र बिचार धारा भएकाहरुको जागरिलो समुह बनाएर उठ्दा प्रभावकारी हुनछ भन्ने कुरा एकदमै सिकायो । समयको हिसाबले, पैसा खर्चको हिसाबले र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कसैको अधिनमा नरहने स्वतन्त्र समुहको हिसाब ले ।
अन्त्यमा, नबनिर्वाचित साथीहरुलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । अपेक्षाकृत यसमा छु कि अब यो झन्झटिलो चुनावलाई सहजीकरण गर्न अनलाइन भोटिङ सिस्टमको ब्यबस्था चाडै नै गरियोस् । सदस्यता बढाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एनएमए डेस्क को बिकास गरियोस् । धन्यवाद , जय नेपाल मेडिकल एशोसिएसन !
# डा. खराल भर्खरै सम्पन्न नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा महासचिव पदमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका चिकित्सक हुन् ।
अस्पतालमा सेवा विस्तार तीव्र, आधुनिक शवगृह निर्माण